ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောဖခင် – FGA Tulsa
Admin / January 28, 2016 / FGA File
ကလေးငယ်တစ်ယောက် သူဖခင် နှင့် စကားပြောသည်။ သားသမီးများ နှင့် ဖခင်များ၏ အရည်အချင်း များအကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ ကလေးငယ်က –“အဖေတွေက သားသမီးတွေထက် အမြဲတမ်း ပိုသိသလား?” “ဒါ ပေါ့ သားရဲ့. . . အဖေ တွေ က အများကြီး ကြုံခဲ့ဘူးတယ်. . ပိုသိတယ်”“ဒါဆိုရင် . . တယ်လီဖုန်း ကို ဘယ်သူ တီထွင်သလဲ?”“အလက်ဇန်းဒါး ဂရေဟမ် ဘဲလ်” ရင်ကော့ပြီး အေးအေးလေး ပြန်ဖြေလိုက်သည်။“အဖေတွေက အမြဲတမ်း ပိုသိတယ် မဟုတ်လား. . . အလက်ဇန်းဒါး ဂရေဟမ် ဘဲလ် ရဲ့ အဖေက ဘာဖြစ်လို့ တယ်လီဖုန်း ကိုသူ့သားထက် ဦးအောင် မတီထွင်ခဲ့ဒါလဲ? ”သည်နှစ်အတွက် ဖခင်များနေ့ အချိန်အခါ သမယမှာ ယုံကြည်ခြင်း၏ ဖခင်ကြီး ဟု တင်စားခြင်း ခံရသောအာဗြဟံ ၏ ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းဖြင့် ခွန်အားယူကြပါစို့။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် အာဗြဟံ ကို ယုံ ဖခင်ကြီးအဖြစ်တင်စားထားသည်။ သူ့ကို ဂျူးဘာသာ ၀င်များ၊ ခရစ်ယာန်များ နှင့် မူဆလင်ဘာသာဝင် များက ယုံကြည်ခြင်း၏ ဖခင်ကြီး ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော သမိုင်းတွင် သူသည် အထင်ကရ လူသားတစ်ဦး ဖခင်ကြီးဖြစ်သည်။ လူ့သမိုင်းတွင် လူသားတိုင်း ဥပဒေ ပညတ် နှင့် ကျင့်ဝတ်များ အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ ကြသော်လည်း အဗြဟံ မူကား ယုံကြည်ခြင်း သက်သက်ဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချဉ်းကပ်သူ၊ ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်အသွယ် ပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ မောရှေ ၏ ပညတ်တော်တရား မရှိခင် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သော သူအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ခြင်း ကို ရရှိခဲ့သောသူ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ ကို ယုံကြည်ခြင်း၏ ဖခင်ကြီး ဟု ခေါ်ဆို ရခြင်းမှာ သူသည် သူတော်စင် တစ်ပါးကဲ့သို့ ကျင့်ကြံ ပြောဆို နေထိုင် ခဲ့သောကြောင့် မဟုတ်ပါ ဘုရားသခင် က အာဗြဟံ အား ပေးသော ကောင်းကြီး သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတော် သက်သက် ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။
လူ အတော်များများသည် ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက်တော် မရောက်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ပြင်ဆင်ရမည်၊ ဘုရားကျောင်း မှန်အောင် တက်ရမည်၊ အကျင့်ဆိုးများကို ပြုပြင်ရမည်၊ ထိုနောက် မှသာ ဘုရားသခင်ထံ ခိုလှုံကိုးကွယ်ရမည် (သို့) ၀င်သင့်သည် ဟု ထင်မှတ်မှားတတ်ကြသည်။ မှားယွင်းသော အယူအဆဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ထံခိုလှုံသောသူ၊ ကိုးကွယ်သောသည် ရှိသည်အတိုင်း ခိုလှုံကိုးကွယ်ရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာ၊ ကိစ္စအားလုံး ကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း ကိုသာ မြဲမြဲ ဆွဲကိုင်၍ အထံတော် အောက် တိုးဝင် ဆက်ကပ် ခိုလှုံရမည်။ ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ က ယုံကြည်ခြင်းမှ လွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ တတ်နိုင်သော အရာ တစ်ခုမှ မရှိကြောင်း ထင်ရှားစွာ ပြခဲ့သည်။ ဤ အရာသည် လူသားများ အတွက် နားလည် လိုက်လျှောက်ရန် အလွန် ခက်ခဲသောအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင် လုပ်ရမှ ကိုယ်တိုင် ခံစားရမည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခံယူထားကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ရောမ ၄း၂၃-၂၄ တွင်
“ထိုသို့မှတ်တော်မူသည်ဟု အာဗြဟံအကျိုးအလိုငှါသာ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည် မဟုတ်။ ငါတို့အကျိုး အလိုငှါရေးထားသတည်း။ ငါတို့သခင်ယေရှုကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသောသူကို ငါတို့သည်ယုံကြည်လျှင်၊ ထိုယုံကြည်ခြင်းကို ငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု မှတ်တော်မူလတံ့။”
ဟုရေးသားထားသည်။ အာဗြဟံ ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်မျက်မှောက်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုရစေ သကဲ့သို့ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့သည်လည်း ယုံကြည်ခြင်း ကို မြဲမြဲဆွဲကိုင် လျှင် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဧဖက် ၂း၈ တွင်
“ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလို အလျာက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာ (လက်ဆောင်) ဖြစ်သတည်း။ ၉ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ။” ဟု ဆိုသည်။
“ကယ်တင်ခြင်း” သည် ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဆုလဒ်(Reward) သို့မဟုတ် (Award) မဟုတ်ပါ။ ဆုလဒ် များ Award များသည် မိမိတို့၏ ကျိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေနှင့် ချီးမြှင့်သော အရာများဖြစ်၍၊ လက်ဆောင် (Gift) သည် မိမိ ၏ ကျိုးစားအားထုတ် မှု တခုခု ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပေးသောသူက ပေးချင်သောကြောင့် ပေးသော အရာဖြစ်သည်။ “ကယ်တင်ခြင်း” ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ပေးသော “လက်ဆောင်” ဖြစ်သည်၊ ဆုလဒ်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ရရှိသောသူသည် ၄င်း ၏ ကျိုးစားအားထုတ်မှု တခုခုကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် ကကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် ဆုချခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်း သည် ဆုလဒ်ဖြစ်မည် ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသောသူသည် ၀ါကြွားနိုင်သော အခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်း သည် ဆုလဒ် မဟုတ် လက်ဆောင် သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ါကြွားစရာ အကြောင်းမရှိပါ ဟု တမန်တော် ရှင်ပေါလု က ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ၏ (ယုံကြည်ခြင်း + ဗလာနတ္တိ ) ပုံသေနည်းသည် ယနေ့ ကျွန်ုပ်အတွက်လည်း မှန်ကန်နေသေးသည်။ (သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း + ဗလာနတ္တိ = ကယ်တင်ခြင်း) သည် ကယ်တင်ခြင်း အတွက် တစ်ခုတည်းသော အမှန်ကန်ဆုံး ပုံသေနည်း ဖြစ်သည်။ ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ သည် သူ၏ နှလုံးသားတွင် ရှိသော တံခါးများစွာထဲမှ ယုံကြည်ခြင်းတည်း ဟူသော တံခါး တစ်ချက်ကို သာဖွင့်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခဲ့ပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်း ၏ ဖခင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ကိုရရှိခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေလည်း မိမိ နှလုံးသား၏ မြောက်များစွာသော တံခါးများထဲမှ “ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း” တည်း ဟူသော တံခါး တစ်ချက်ကိုသာ ဖွင့်ဟလျှက် မိမိဘ၀ကို လျှောက်လှမ်း ကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံမှ လာသော ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း နှင့် ကောင်းကြီးများ ကိုခံစားရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ သည် သူနှင့် ဘုရားသခင် အကြားတည်ဆောက်ခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်း ကို အခြေပြုသည့် (Relationship) ကို သင်ခန်းစာယူ ကြပါစို့။
တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ရင်ကျက် ခိုင်မာ လာခြင်း မရှိဘဲ နဂို မူလ ရှိရင်စွဲအတိုင်း ရှိမြဲဖြစ်မြဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ခလေး ဘ၀ မှ တိုးတက်ကြီးထွားခြင်း မရှိဘဲ တစ်သက်လုံး နို့နံ့မစင် သည် သူငယ်နှပ်စား ဘ၀တွင် ရွာလယ် နေတတ်ကြသည်။ ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ ၏ ယုံကြည်ခြင်း အချိန်ကာလ ရွေ့လျားသည်နှင့်အမျှ ရင့်ကျက်လာသည် ကို တွေ့ရသည်။
၁။ ရောမ ၄း၁၈ တွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားသည်။
“သင်၏အမျိုးအနွှယ်သည် ထိုသို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသော ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း၊ မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏ အဘဖြစ်မည်ဟု မြော်လင့်စရာ အကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍ မြော်လင့်လေ၏။”
ဘုရားသခင်သည် အသက်ကြီးပြီဖြစ်သော အာဗြဟံနှင့် ဇနီးအား ရင်သွေးရတနာ ပေးမည်ဟု ကတိပေးထား ခဲ့သော်လည်း ၁၃ နှစ်တိုင်အောင် ကလေးမရခဲ့ပါ။ သို့သော် အာဗြဟံသည် မျှော်လင့်ခြင်း နှင့် အားပြိုင် အံတုလျက်၊ မျှော်လင့်စရာမကောင်း သော်လည်၊ မျှော်လင့်စရာ အကြောင်း မရှိသော်လည်း ဘုရားပေးသော ရင်သွေးရတနာကို ရရှိမည်ဟု ယုံကြည် ခြင်းတွင် မြဲမြံသည် ကို တွေ့ရသည်။ အချိန်ကာလ ရွေ့လျားသွားသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်း ၌ မြဲမြဲ ရပ်တည်သည်။
၂။ ရောမ ၄း၁၉ –
“ယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်၍ မိမိအသက်သည် အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်၊ မိမိကိုယ်သည် အသေကဲ့သို့ ရှိကြောင်းကို၎င်း၊ မိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ ဝမ်းသည် သေကြောင်းကို၎င်း မအောက်မေ့၊”
ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးသောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အသက် (၁၀၀) လောက် ရှိပြီး ရင်သွေးရတနာ ရနိုင်သည့် အရွယ် မဟုတ်၊ သေ လူနှင့် မထူးခြားသည့် ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည့် အကြောင်းနှင့် ဇနီးသည် စာရာ သည်လည်း ခလေး မွေးနိုင်သည့် အရွယ် မဟုတ်တော့ သည်ကိုလည်း စိတ်တွင် မည်သို့မျှ မစဉ်းစားပါ၊ မယူဆပါဟု ဆိုသည်။
၃။ ရောမ ၄း၂၀ –
“ယုံမှားသောစိတ်နှင့် ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော် ကိုတွေးတော ခြင်းမရှိ၊ ယုံကြည်အားကြီးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍၊”
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၇း၁၇ တွင် ဘုရားပေးသော ဂတိတော်နှင့် ပတ်သက် ပြီး အနည်းငယ် မတင်မကျ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ခံစား ရသည်ကို တွေ့ရသည် “ထိုအခါ အာဗြဟံသည် ပြပ်ဝပ်လျက်၊ အသက်တရာရှိသော သူသည် သားကိုရလိမ့်မည်လော။ အသက်ကိုးဆယ် ရှိသော စာရာသည် သားကိုဘွားလိမ့်မည်လောဟု ရယ်လျက်၊ စိတ်နှလုံး ထဲမှာအောက်မေ့ပြီးလျှင်၊” သို့သော် ဘုရားသခင် သည် ထို အရာကို ခွင့်လွတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း ခဲ့သည်။
၄။ ရောမ ၄း၂၁
“ဂတိထားတော်မူသော သူသည် ဂတိတော် အတိုင်း တတ်နိုင်တော်မူသည်ကို စိတ်စွဲလမ်းလေ၏။”
ဘုရားသခင် မတတ်နိုင်သော အရာမရှိ ဟု ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်သည် ဟု သဘောပေါက်ရသည်။ ဘုရားသခင် ဂတိ ပေးလျှင် ပေးသည့် ဂတိ အတိုင်း တတ်နိုင်သည်၊ အသက်မည်မျှပင် ကြီးနေပေစေ၊ ကျန်းမာသည် ဖြစ်စေ၊ မကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် အခြေအနေ တွင်ရှိနေပေစေ၊ ဘုရားသခင် သည်ပေးထား သည့် ဂတိကို ပေးမည်ဟု စိတ်တွင် အခိုင်အမာ စွဲလမ်းသည်၊ ခံယူသည်။
၅။ ရောမ ၄း၂၂ –
“ထိုကြောင့်၊ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။”
ဘုရားသခင်သည် ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ၏ ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးမှု ကြောင့် လူ့ မျက်စိ၊ လူ့အတွေးအခေါ်အရ ဖြောင့်မတ်သော သူမဟုတ်လင့်ကစား၊ ဖြောင့်မတ်သည် ဟု အသိအမှတ်ပြုသည်၊ မှတ်ယူသည် ဟု သဘောပေါက် ရပါသည်။
မိတ်ဆွေ ၏ ဘ၀တွင် မည်သည့် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသလည်း? ကျော်လွား ၍ အနိုင်ယူနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်၊ လမ်းစ မရှိ ဟု ခံစားရသော အတားအဆီး၊ ခက်ခဲမှုများ နှင့် ကြုံတွေ့ဘူးပါသလား။ ရောမ ၄း၁၆ တွင် – “ထိုကြောင့်၊ ဂတိတော် သည် ပညတ်တရားနှင့်ဆိုင်သော အမျိုးအနွှယ် တို့၌ပြည့်စုံ သည်သာမက၊ အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် ဆိုင်သောသူတို့၌ ပြည့်စုံလျက်၊ အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွှယ် အပေါင်းတို့၌ ပြည့်စုံမည် အကြောင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေ ခြင်းငှါ၊ ယုံကြည်ခြင်း တရား ကိုသာအမှီပြု၍ ရောက်နိုင်၏။” ဟု ဆိုထားသည်။
ဟေဗြဲ ၁၁း၆ တွင် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည်၊ ဘုရားသခင်ရှိတော် မူသည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာသောသူအား အကျိုးပေး တော်မူသည်ကို၎င်း၊ ယုံကြည်ရမည် ဟ ဆိုထားသည်။
မိတ်ဆွေ၏ ဘ၀တွင် ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ယုံကြည်ခြင်း အားအင်သစ် များလိုအပ်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ကျမ်းမာခြင်း ဆုကျေးဇူး ရရှိဖို့ အတွက်၊ ဆုတောင်းချက် များကို ဘုရားသခင် နားငြောင်း ဖို့ အတွက် ယုံကြည်ခြင်း အားအင်သစ်များ ရရှိလိုပါ သလား? မိတ်ဆွေ ဘ၀ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် တွေအတွက် မိမိရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းပကား အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင် ရဲ့ တန်ခိုး နှင့် ရင်ဆိုင်၍ အရာခပ်သိမ်းကို အနိုင်ယူသော ဘ၀ကို လျှေက်လှမ်းလိုပါသလား? – ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို စံနမူနာ၍ လျှောက်လှမ်းပါလေ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်း ခိုင်ခန့်သော မြဲမြံသော ယုံကြည်ခြင်း များဖြင့် ဘ၀ခရီး လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ. . .
Category FGA File Tag Article Burmese
← KAHLEI - MIZAT
Hosanna Live Worship MP3 Album Apple Store leh Google Play ah ki lei theita →